I-Apple ukubhengeza iziphumo zekota yesine nge-4 kaNovemba | Ndisuka mac
U-Apple uza kubhengeza iziphumo zekota ye-4 ngo-Novemba 2
Inkampani yaseMelika ese-Cupertino yazise emini izolo ukuba Nge-2 kaNovemba ezayo izakubhengeza iziphumo zekota 4 yezemali (Ikota yekhalenda yesi-3) yalo nyaka ka-2017. Amaqela abatyali zimali kunye neenkampani zezezimali zixelelwe kwiphepha elizinikeleyo kubudlelwane babatyali zimali.
Kutshilo isibhengezo iya kubonelela ngokujonga okokuqala ukuba iimodeli ezintsha zorhwebo zifunyenwe njani, zombini iimodeli ezintsha ze-iPhone kunye nokubukela okutsha, kwiveki yokuqala yokwaziswa kwayo.
Kuqikelelwa ukuba I-Apple inokuxela ingeniso enexabiso eliphakathi kwe- $ 49 kunye ne- $ 52 yezigidigidi, umda ophakame kakhulu kunalowo ungeniswe kunyaka-mali omnye kunyaka ophelileyo (ngaphezulu kwe- $ 47 yezigidigidi).
Inkampani yaseCalifornia Ayikaboneleli ngolwazi malunga nentengiso efezekisiweyo kwimpelaveki yokuqala yokukhutshwa kwePhones ezintsha. Iziphumo ezisemthethweni kulindeleke ukuba zizalwe ngoNovemba 2, kunye neenzuzo kwezinye zeemarike.
Nangona konke, I-Apple isakhula kwaye ilindele ukuba ibe nengeniso yezigidi zeedola, ukuhlangabezana neenjongo zayo ezinamabhongo kwintengiso yeemveliso, isetwe njengesiqhelo ekuqaleni konyaka-mali.
Isiteyitimenti somvuzo sarhoqo ngekota siya kwenzeka nge-1.30: 4.30 PM kwindawo yePacific, nge-22.00: XNUMXPM eMpuma (malunga ne-XNUMX: XNUMX ngokuhlwa kweSpain). Siza kujonga ulwazi olufika luvela eCupertino.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » U-Apple uza kubhengeza iziphumo zekota ye-4 ngo-Novemba 2
I-Apple inokwenza iichips zayo zilungelelaniswe neeMacs ezintsha